Inodhura uye Yakasimba SEO Yekutarisa Zvishandiso
Inodhura uye Yakasimba SEO Kuongorora
Muvhuro, June 4, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Takatarisana neziso SERPS.com kwekanguva ikozvino. Muvambi Scott Krager akatiratidza mavhezheni ekutanga uye takafadzwa chaizvo. Takashandisa mugove wedu we SEO maturusi ekuongorora pamberi. Zvisinei, SEO inoramba ichichinja… Uye maturusi mazhinji haasati akachengetedza.
Chikwata chaScott chakagamuchira shanduko uye chaicho chakauya nehurongwa hwakanyatsosiyana… nekwaniso yekubatanidza zvakananga ne Google Analytics, chengetedza magariro, kuyera zviitiko zvekuyedza - zvese zvinodhura kuburikidza neyakajeka mushandisi interface. Izvi hazvisi zvekutanga chete, kunyangwe… SERPs ichakubvumidza iwe kuyedza pasirese zvakare mu kupfuura nyika dze65!
Scott anonongedzera aya mana makiyi kusiyanisa kuchikuva:
Our SEO bvunzo chimiro chakanyatso nyatso. 3 kudzvanya uye iwe unogona kuseta iyo SEO yekubatanidza bvunzo kuti uone zviri kushanda uye chii chisiri munzvimbo yako.
Yedu yemazuva ese kiyi kiyi masosi inosangana zvine simba ne Google Analytics saka iwe unogona kuona pakatarisa kuti michero yakaturikwa yakaderera kwauri uri pane chero zuva rakapihwa.
Iyo dashboard inokutendera iwe kurumidza kutenderera kuburikidza nemasaiti uye ita yakakosha hutano cheki saiti yega yega. Yakakura kana iwe uchikwanisa akawanda masaiti.
Our peji-chikamu chekuona zvinokutendera kuti uone zviri nyore kuwirirana pakati pechikero, traffic, uye metric metric mune chati isina kuita kuti maziso ako abude ropa.
Heano sneak peek yeSERPs iri kuuya SEO yekutarisa dashboard maficha uye mashandiro:
Nepo akawanda ekunyorera kunze uko achidhura mazana kana zviuru pamwedzi, SERPs inotanga pa $ 9 pamwedzi… Mutengo uyo chero mushambadzi anogona kutenga (uye anofanira kutora mukana). Pakeji yavo hombe inokutendera kuti utarise mazwi akakosha chiuru pamapeji zviuru zvishanu pamadhora makumi masere nemasere pamwedzi… kwete zvakaipa. Tanga yako 14 zuva kutongwa izvozvi!
Tags: google analyticsseoseo kuongororaseo chikuvaseo kuyedzaseo toolseo zanaserps
Zvemagariro Kugovera Bhatani Nhandare
10 Nhare mbozha Kufunga
Jun 6, 2012 pa4: 54AM
Yaa shamwari ichi ichokwadi kuti Google Analytics ichokwadi yakanaka seo chishandiso uye Webmaster chishandiso zvakare